Qaado Stress ah Out of Dabaaldegyada la Kuwani Talooyin Qorshaynta Xisbiga - Rule News
Qaado Stress ah Out of Dabaaldegyada la Kuwani Talooyin Qorshaynta Xisbiga
Qorshaynta xisbi waxay noqon kartaa wax badan oo xiiso leh haddii aad ku raaxeystaan ​​dhacdooyinka martigelin, laakiin waxay sidoo kale noqon kartaa runtii walaac sida aad sort dhan ah faahfaahinta, jartaan oo dhan waratada ah, oo lala iman lahaa liiska martida.
Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, waxaa jira siyaabo dhowr ah in ay qaataan stress ka soo dabaal leh qaar ka mid ah talooyin qorshaynta xisbiga anfacaya. Fiiri liiska hoos ku qoran dhawr ka mid ah talooyinkan si aad dhab ahaantii ku raaxaysan karaan daqiiqad kasta oo nidaamka dhacdo qorshaynta.
Fududee Dhalashada xisbiga Kid ee
Marka la qorshaynayo xafladda dhalashada ee ilmaha, waxay noqon kartaa adag si ay u sii madaxa heer. Xusuusnow in kids uma baahna wax badan by hab oo cunto ah, malana iyo Qurxinta; kaliya ay doonayaan in ay leeyihiin xiiso leh. Sifada loo on hawlaha in ay ku raaxaysan karaan inta lagu guda jiro dhacdo waa talaabo horaysay ee xisbiga guul aad, sidaa darteed eegto kabsato kirada guriga, kulan, movies, iwm.
Sidoo kale, aadan xitaa run ahaantii ma u baahan tahay in ay diiradda saaraan menu a buuxda martidaada sababtoo ah qaar ka mid ah pizza iyo wax badan oo is-adeegi fudud, oo ay la socdaan cake iyo jalaatada, waa in ku filan. Ka dhig dhacdo gaaban oo fudud, ka mid ah liiska casumaadaha iyo martida, in Qurxinta iyo xisbiga Nicmada, iyo sii baahida ilmahaaga, dabcigiisa, iyo rabitaankayga maanka.
Joogtee Liiska si joog Organized
In qofku urursanaado habka qorshaynta xisbiga samayn kartaa yaabab ugu stress yareeya. Waxaad awoodi kartaa sii a liiska yar, oo ay ku jiraan liiska Masterka, waxyaalo aad u baahan tahay si loo fuliyo ka hor maalinta weyn, oo waxaad eegi kartaa off alaabta liiska sida aad u tagto.
Liiska sayidkiisa waa in wax kasta oo aad gabi ahaanba waa dhammayn. Markaas waxaad heli kartaa liiska oo dhan ee sahayda aad u baahan tahay si aad u hesho, iyo sidoo kale waxaad heli kartaa liiska martida aad ku sii track ka kooban cuntooyinka, RSVPs, iyo macluumaadka xiriirka.
In la dhiso Theme ah ee xisbiga
Marka aad ka fikirto oo dhan faahfaahin aad u baahan tahay si ay u kala soocaan dhex xisbi hubaal noqon kartaa daad, laakiin waxa aad bilaabi kartaa in ay keenaan heerarka walaaca aad hoos by si fudud u sameynta waxa theme of dhacdo waxay noqon doontaa. Haddii aad tuuraya xisbi ee ilmahaaga, Xisbiga fariistay aabbahaa for a, ama xisbiga ah si ay ugu dabaal horumarinta ninkaaga ee, aad had iyo jeer ka heli kartaa xiiso leh iyo theme ugeeyaan la isugu keeno oo dhan faahfaahinta.
Marka aad dhigay theme a, Waa in aad ogaato in hawlaha iyo qurxinta sort of xaq u dhicin meel. Waxaad yeelan doontaa in ay curiyaan fikrado dheeraad ah si fudud oo la ogaado waxa aad u baahan tahay si aad u iibsato inay nolosha keena theme.
Ha ka baqin inaad Weydiiso Caawinaad
mid ka mid No abid sheegay in aad leedahay si ay u qorsheeyaan xisbi oo dhan naftaada by. Qaado qaar ka mid ah stress ka naftaada by shaqaaleysato gargaarana qaar ka mid ah oo iyaga bixinta, haddii loo baahdo. Waxay kaa caawin karaan inta lagu jiro geedi socodka qorshaynta ama inta lagu guda jiro dhacdo laftiisa si loo hubiyo in wax walba si qumaati ah.
Marka aad ogaado sida aad u qaadanayso stress ka soo qorshaynta xisbiga, aad runtii ku raaxaysan karaan nidaamka oo dhan, gaar ahaan dhacdo dhamaadka waxaa oo dhan.
← Tipron: A Rolling bu'da Robot Projector [VIDEO] Alzheimer ee daaweynta dhow sida bararka maskaxda muujiyey inuu muhiimka ah →